नयाँ होण्डा सिटी नेपाली बजारमा
५ माघ, काठमाडौं । नेपालका लागि होण्डा गाडीको आधिकारिक बिक्रेता स्याकार ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्रा. लि. ले होण्डा सिटीको ५औं जेनरेशनलाई नेपाली बजारमा भित्र्याएको छ । होण्डा सिटी पहिलोपटक लन्च भएदेखि यसले सेडान कारहरुको बजारमा आफ्नो पृथक पहिचान बनाएको छ । आकर्षक डिजाइन भएकोे होण्डा सिटीको यस जेनरेशनको लम्बाई र चौडाई अघिल्लो जेनरेशनभन्दा बढी रहेको कम्पनीले जनाएको छ ।
होण्डा सोलिड विइङ्ग फेस डिजाइनमा आधारित यस होण्डा सिटीमा वन् टच् इलेक्ट्रिक सन्रुफ, शार्क फिन् एन्टेना, फुल एल.इ.डी. हेडल्याम्पका साथै ९ एरे इनलाइन शेल इन्टिग्रेटेड लेड डिआरएल, एल आकार एल.इ.डी. टर्न इन्डिकेटर, जेड आकार थ्रिडी ¥याप एराउण्ड यूनिफर्म लेड साइड मार्क लाइट जस्ता अन्य धेरै विशेषताहरु रहेका छन् ।
यसका साथै होण्डा सिटीले पहिलो पटक यस सेग्मेन्टमा एलेक्सा भ्वाईस सर्भिस मार्फत कार उपभोक्ताहरुलाई सामाजिक र डिजिटल संसारसँग जोड्ने छ । उत्कृष्ट माइलेज रहेको होण्डा सिटीको ७ स्पिड अटोम्याटिक ट्रान्समिसनमा तपाईंले १८.४ कि.मि. प्रति लिटर र ६ स्पिड म्यानूयल ट्रान्समिसनमा तपाईंले १७.८ कि.मि. प्रति लिटरको माइलेज प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ । यसका साथै यस सेग्मेन्टमा लेन वाँच क्यामेरा भएको होण्डा सिटी पहिलो सेडान हो जसले गर्दा तपाईंले सहज पार्किङ्ग गर्न सक्नुहुनेछ । I-SRS युक्त ६ एयर ब्याग रहेको यो कार आफ्नो सेग्मेन्टको सबै भन्दा सुरक्षित कार हो ।
य माघ ५ गते धोबिघाट शोरुमबाट होण्डा सिटीको दुई भेरियन्टहरु होण्डा VX CVT र ZX CVT लन्च गरिएको छ । नेपाली बजारमा होण्डा सिटी VX CVT को मूल्य रु. ६५ लाख ९० हजार र होण्डा सिटी ZX CVT को मूल्य रु. ६९ लाख ९० हजार तोकिएको छ ।
कर्णालीमा योजना अनुगमन संयन्त्र गठन
रोकिएनन् आपराधिक क्रियाकलापः झरफुकको नाममा तातो पन्यूले डामेर हत्या
प्राविधिक शिक्षा पढाउन आवश्यक छः उपाध्यक्ष डा.कँडेल
चितवनको हाकिम चोकमा एनसीसी बैंकको नयाँ शाखा
कोरोना भाइरसको महामारी तीव्र रूपमा फैलिन थालेपछि भारतको दिल्लीमा निशेधाज्ञा जारी
उच्च जोखिमका कैदीबन्दीलाई छुट दिन सर्वोच्चको आदेश
२०७७ भाद्र २५ गते बिहिवार
मुख्यमन्त्री राईले कसे लगनगाँठो
शिकारी र प्रहरीबिच गोली हानाहान, एक पक्राउ
डा. शेखर कोइरालाको प्रश्न : के ओली महाराजा बन्न लालायित भएका हुन् ?
प्रदेश २ को प्रमुखमा मिश्र नियुक्त
निषेधाज्ञा गरेकै दिनदेखि तरकारीको मूल्य ८० प्रतिशतसम्म बढ्यो
संखुवासभामा एक साता निषेधाज्ञा जारी
खाद्यको चामल बजारमा भन्दा महंगो, बिक्नै छाड्यो
चन्द्रागिरीको सेयर मूल्य २ हजार नाघ्यो
नेदरल्याण्डमा कर्फयूको समयावधि लम्बियो
नेपाल चेम्बर अफ कमर्सको अध्यक्षमा राजेन्द्र मल्ल निर्विरोध निर्वाचित